Calrec Debuts Maqnaanshaha Cusub ee Cusub ee NAB Show New York - NAB Show News by Broadcast Beat. Wargeyska rasmiga ah ee NAB Show, Soo-saaraha NAB Show LIVE
Home » Featured » Calrec Debuts Hore New Impulse Core ee NAB Show New York
Qodobka ugu muhiimsan waa farsameynta maqalka xoog leh iyo mihnad isdabajooga leh AES67 iyo SMPTE Xiriirka 2110. Iyada oo la xidhiidha xakamaynta IP-ga, dusha sare waxay noqon kartaa mid fog oo ku xiran shabakadaha caadiga ah iyagoo isticmaalaya qalabka COTS. Tiknoolajiyadani waxay u sahlanaataa dhammaan macaamiisha Calrec-ka inay u gudbaan codka jiilka xiga (NGA) iyo IP-ga, waxayna bixisaa dabacsanaanta si ay u sameeyaan iyadoon dib-u-habayn qalab soo saarin.
"Muhiimada asaasiga ah waa mashruuc DSP oo aad u adag oo la qabadsiin karo oo ku habboon qorshaha horumarinta mustaqbalka ee Calrec, maaddaama aan sii wadno isbeddelka iyo macaamiisheena si aan u hagaajineyno habka casriga ah ee IP-ga," ayuu yidhi Dave Letson, Calrec's VP ee Sales. "Iyadoo IP noqotey mid aad u baahsan, waa Kalrec yoolka lagu yareeynayo kharashka ku-meel-gaar ah oo ka dhiga khibrad macquul ah macaamiisha hadda iyo kuwa cusub oo doonaya in ay cusboonaysiiyaan shaqooyinka ugu dambeeyay."
Waxyaabaha aan xakameyneynin waxay bixisaa 3D dariiqa muraayada ah ee loo yaqaan 'NGA applications', 5.1, 5.1.2, 5.1.4, 7.1, 7.1.2 iyo 7.1.4, waraaqaha, kormeerka iyo cabbiraadda ayaa la heli karaa. Waxay leedahay qaab rikoodhe ah oo AoIP, oo si buuxda u taageeraya helitaanka NMOS helitaanka iyo maareynta xiriirka, iyo sidoo kale mDNS / Ravenna helitaanka. Labo 5U Nadaafad daraadeed ayaa la isugu dari karaa si ay u bixiyaan shaqaale buuxa oo buuxa oo laga yaabo in ay jir ahaan ka fogaadaan midba midka kale ee soo kabashada musiibada.
Marka laga soo tago asaasiga Impulse, Calrec ayaa soo bandhigi doona nooca R R, oo la ballaarin karo, nidaamka raadiyaha ee IP-ga ee bandhigga. Nidaamka xakamaynta jidhka ee nooca R wuxuu ka kooban yahay seddex sirood oo kali ah: guddi fadhi, guddi jilicsan iyo guddi jilicsan. Xiddiga fudud ee 2U oo leh ilo isku-dhafan oo I / O ah ayaa u oggolaanaya macaamiisha in ay si dhaqso ah u ordaan. Xudunta kaliya ayaa kor u qaadi karta ilaa saddex deegaan oo isku dhafan oo isku dhafan, iyada oo aan la wadaagin ilaha DSP. Awoodda lagu isticmaalo makiinada isku dhafan ee isku dhafan oo ay weheliso sahlanaanta shabakada AES67 ee isku xiran oo la wadaago waxay bixisaa dabacsanaan ku filan si ay ula socoto shuruudaha deg dega ah ee raadiyaha.
Calrec's casriyeynta Brio konsoladaha leh awood awoodeed oo la ballaariyey ayaa sidoo kale lagu soo bandhigayaa NAB NY. Xirmooyinka cusub waxay kordhiyaan tirada Brio12 DSP laga bilaabo 48 illaha 64 iyo brio36 laga bilaabo 64 illaa 96. Xirmooyinka DSP waxaa laga heli karaa dhammaan Brio konsoles on v1.1.6 software ama kor; Dayactirka software waa bilaash ka dib diiwaangelinta Brio www.calrec.com/brioregistration.
Calrec Audio wuxuu si gaar ah ugu heegan yahay heer sare ah ee isku darka maqalka iyo hawada ku nool. Khabiir ku takhasusay baahinta muddo ka badan sanado 50, Calrec wuxuu soo saaray dhowr nooc oo kombuyuutaro ah oo ku tiirsan warbaahinta caalamka ugu guulaha badan. Kordhay. Consoles waa qaybaha aasaasiga ah ee shabakadda guud ahaaneed, taas oo kordhinaysa shaqooyinka la qabsashada, khayraadka la wadaago iyo awoodda si sahlan loo ballaariyo. Laga bilaabo bilawga, Calrec wuxuu abuuray xalal cusub oo u oggolaanayay inay sii daayaan farsamoyaqaannada si ay u horumariyaan habka shaqadooda ayna uga helaan qiime ka weyn qalabkooda. Xalalka codka ah ee cod bixinta, ayaa waxay ku dhajiyaan kalsoonida Calrec. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa calrec.com.
2015 hoos bitrate Broadcast Engineer Broadcast Engineering Calrec Audio Control System H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC immersive isovideo JCT-VC dhimista buuqa Spears & Fiilooyinka UHD / 4K / HD Ultra HD Forum viarte Video Engineer Warsaw	2018-10-11
Previous: Saaxiibka MTS waxaa loo magacaabay Justin Paul oo ah madaxa Suuq-geynta Sare
Next: Arvato Systems ayaa ku guuleysta taraafikada baahinta iyo barnaamijka maareynta xuquuqda ee RTÉ Ireland
Hey Buddy !, waxaan ka helay macluumaadkan adiga: "Calrec Debuts Koorsada Cusub ee Cusub ee NAB Show New York". Waa halkan shabakadda internetka: https://www.broadcastbeat.com/calrec-debuts-new-impulse-core-in-the-big-apple/. Mahadsanid.